शिन्जुकुको यी ४ ठाउँ जसले प्राचिन जापानको झझल्को दिनेछ | Japan Info - नेपाली
Japan Info > Japan Info - नेपाली > SHINJUKU > शिन्जुकुको यी ४ ठाउँ जसले प्राचिन जापानको झझल्को दिनेछ
शिन्जुकु भन्ने बित्तिकै सबैको मनमा अग्ला अग्ला गगन चुम्बी बिल्डिंग, रति झलमल्ल बाल्ने बत्ति, व्यस्त आधुनिक सडक र हावाको गतिमा कुद्ने बिधुतिय रेलको चित्र आउदछ। हुनपनि शिन्जुकु जापानको सबै भन्दा आधुनिक क्षेत्र हो। यो मानिसको भिडले २४औ घण्टा जिबन्त देखिन्छ। तर शिन्जुकुमा अझै यस्ता स-साना ठाउँ छन् जसले हजुरलाई प्राचिन जापानको झझल्को दिलाउनेछ। यी ठाउँहरु घुमेर हजुरले पुरानो जापानको समयहीन सुन्दरताको आनन्द लिन सक्नु हुनेछ।
१. ओमोइदे योकोचो
ओमोइदे योकोचो एउटा सानो गल्लि हो। यहाँ याकितोरी र ग्रिल्ड फुडको ६० वोटा जति सानो सानो स्टल छन्। यो गल्लि सिन्जुकु स्टेसनको वेस्ट एक्जिट नजिकै छ। यो गल्लिलाई मेमोरी लेन पनि भनिन्छ। यो गल्लिले रक्सि पिउनको लागि १९४० देखिको ईतिहास बोकेको छ। दोस्रो विश्व युद्द पछि यहाको थुप्रै पसल आगलागिले नस्ट भएका थिए। त्यति बेला उदोन र रामेन बनाउन पिठोको कमि भएपछि त्यहाका मानिसहरुले पोलेको मासु बेच्न सुरु गरेका थिए। पोलेको मासुमा पोर्कको कलेजो, आन्द्राहरु हुन्थे। यसलाई मोचुयाकी भनिन्थ्यो।
अहिले पनि यहाको पसलहरुमा मोचुयाकी बनाईन्छ। अरुपसलमा भने रामेन, याकितोरी, सोबा, सुशी लगाएत थुप्रै खाने कुराहरु पाईन्छ। कुनै कुनै पसलहरु बिहानै देखि खुल्ने गर्दछन। विकडेको दिउसो त्यति भिडभाड नहुने हुनाले भिड मननपर्नेहरु रातिको समय भन्दा पनि दिउसो जादा राम्रो हुन्छ। याकितोरी, मोचुयाकी संगै आफुलाई मनपर्ने ड्रिङ्कको मजा लिनुहोस्।
शिन्जुकु ओमोइदे योकोचोको वेबसाईट
२. सामूराई म्युजियम
मनोरंजन र रेड्लाईट क्षेत्ररहेको सिन्जुकुमा पुरानो सामान राखिएको म्युजियम छ भन्दा अचम्मको कुरा लाग्दछ। तर शिन्जुकुको काबुकिच्यो एरियामा एउटा सामूराई म्युजियम छ। यो म्युजियममा सामुराईहरुले लगाउने कवच, हेलमेट(काबुतो), तरबार, अन्य हतियार र पोशाकहरु राखिएको छ। यी बस्तुहरु सिसा भित्र नराखिएको हुनाले आउने मानिसहरुले नजिकै बाट राम्रो संग सबै डिटेल देख्न पाउदछन।
यो म्युजियमले हजुरलाई थप अनुभब दिन सामूराई क्यालिग्रफी लेसन र सामूराई ब्याटल पर्फमेन्स पनि दिने गर्दछन। पाहुनाहरुले सामूराईको पुरा पोशाक लगाएर फोटोपनि खिच्न मिल्दछ। जापानिज भाषा नबुझ्नेहरुको लागि सामूराईको ईतिहास बुझ्न गारो नहोस भनेर अंग्रेजीमा पनि सबै सेवा उपलब्ध गराईएको छ।
सामूराई म्युजियमको वेबसाईट
३. हान्जोमोन श्राईन
यो मन्दिरलाई फ्लावर गार्डेन श्राईन पनि भनिन्छ। यो मन्दिर १७ शताब्दीमा बनेको हो। यो शिन्तो धर्मको मन्दिरमा धेरै आगलागी भएको छ। दोस्रो विश्व युद्धको बम हमलाले यो मन्दिर पूर्ण रुपमा नस्ट भएको थियो। पछि यो मन्दिरलाई फेरी पुरानै शैलीमा बनाइएको हो। मानिसहरु यो शान्त मन्दिरमा आफ्नो ब्यापारको उन्नति र वृद्धि होस् भनेर आउदछन। आईतबार यहाँ सानो हाट बजार लाग्ने गर्दछ। त्यो बजारमा हजुरले पुराना एनटिक सामान किन्न सक्नु हुनेछ।
हान्जोमोन श्राईनको वेबसाईट
४. शिन्जुकु ग्योएन नेसनल गार्डेन
शिन्जुकुको घुमघाम, शपिंग र नाईट लाइफले थाक्नु भएको छ भने यो शिन्जुकु ग्योएन नेसनल गार्डेनको शान्त वातावरणमा एकछिन रमाउनुहोस। यो पार्क पहिले कियोनारि नाइतो नामका सम्राटको थियो। उनि एदो युगका शासक थिए। उनको सासन पछि यो पार्क इम्पेरल फ्यामिली (अहिलेका सम्राटको परिवार)लाई दिईएको थियो। १९०६मा यसलाई इम्पेरल गार्डेन बनाईयो। दोस्रो विश्व युद्ध पछि यो नेसनल गार्डेन बन्यो। त्यस पश्चात यो पार्क सर्व साधारणहरुको लागि पनि खुल्ला गरिएको हो। यो पार्कको मुख्य विशेसता भनेको पुरानो जापानी स्टाईलको बगैचा हो। यो पार्कले मानिसलाई जापानको मेइजि युगको बगैचाको झझल्को दिनेछ। यहाँ पोखरी, पुल र राम्रो संग छाटिएका घास र बिरुवाहरु छन्।
शिन्जुकु ग्योएन नेसनल गार्डेनको वेबसाईट
शिन्जुकु पक्कै पनि ब्यापारिक, मनोरंजन, शपिंगको लागि जापानको टप ठाउँ हो। तर यहाँ पनि पुरानो जापानको झलक दिने थुप्रै ठाउँहरु छन्। जापानले आधुनिक हुन र आफ्नो प्राचिन शभ्यता कायम राख्न राम्रो संग जानेको छ।